DIN8077 PPR ပိုက်ပေးသွင်းသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ် - စက်ရုံစျေးနှုန်း - နေပူပူ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PPR ပိုက်နှင့် fittings > PPR ပိုက် > DIN8077 PPR ပိုက်
DIN8077 PPR ပိုက်
DIN8077 PPR ရေပိုက်နှင့်အပူအတွက် PN16 PN16၊ PN20, PN25၊ အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူရောင်ရှိသောရွေးချယ်မှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ရေပိုက်နှင့် ၁၅ နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့်အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုလက္ကားစျေးနှင့်လျင်မြန်စွာပေးပို့နိုင်သည် တွေ့ဆုံခဲ့သည် SUNPLAST မှ PPR ပိုက်များ၏အသေးစိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
PPR ပိုက်များနှင့် fittings များကို type3ဟုလည်းခေါ်သည့် polypropylene ကျပန်း copolymer မှထုတ်လုပ်သည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ လုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ အသုံးချခြင်းနှင့်အားသာချက်တို့ဖြင့်အထူးသဖြင့် PPR ပိုက်များနှင့် fittings များကိုအအေး (PN10) နှင့်ရေပူစနစ် (PN20)၊ ရေသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒပိုက်များအလုပ်လုပ်သည်။ ပုံမှန်အလုပ်ဖိအားနှင့်အခြေအနေတွင်ပိုက်စနစ်၏သက်တမ်းသည်အနည်းဆုံးအနှစ် ၅၀ အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
SUNPLAST PPR ပိုက်နှင့် fittings များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်း GB / T 18742 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။ အရွယ်အစားသည် ၂၀ မီလီမီတာမှ ၁၁၀ မီလီမီတာအထိရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည် DIN8077 / 8078 & EN ISO15874 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လည်းကိုက်ညီနိုင်သည်။ ၉၅ ံအထိမြင့်မားသောအပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ၂၅ bar အထိဖိအားပေးမှုနှုန်းသည် PPR piping system ကိုအသုံးချခြင်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်။
PN12.5 ဘား, PN16 အရက်ဆိုင်, PN20 အရက်ဆိုင်, PN25 အရက်ဆိုင်
GB ကို / T က 18742, Din 8077/8078, EN က ISO 15874
အရှည် ၄ မီတာရှိသောဘားတန်းများတွင်ပိုက်တစ်ခုစီကို PP အိတ်များဖြင့်သုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုအတိုင်းပြုလုပ်ပါ
20ft ကွန်တိန်နာများအတွက် 10-15 ရက်, 20ft ရက် 40ft ကွန်တိန်နာများအတွက်
PPR ပိုက် (GB ကို / T က 18742, Din 8077/8078, EN က ISO 15874)
20 × ၃.၄
၂၅ × ၂.၈
၂၅ × ၄.၂
၃၂ × ၂.၉
၃၂ × ၃.၆
40 × ၃.၇
၄၀ × ၄.၅
၅၀ × ၄.၆
၅၀ × ၅.၆
၅၀ × ၆.၉
၆၃ × ၅.၈
၆၃ × ၇.၁
၇၅ × ၈.၄
※ Could SUNPLAST PPR ပိုက်s & fittings be used at high temperature water systems?
A:Yes, PPR ပိုက်s & fittings can be used at max. 95℃ hot water for 50 years in normal use.
※ Can SUNPLAST PPR ပိုက်s be used in underfloor heating systems?
A: Yes, PPR ပိုက်s & fitting haveagood performance when they are used for hot water. Thus, they can be used as underfloor heating pipe.
※ What’s the main difference between HDPE pipe & PPR ပိုက်? How can i makeachoice?
A: HDPE pipe made by polyethylene is NOT suitable for hot water supply PPR ပိုက် can be used at max. 95℃ temperature hot water.
For piping system for hot water, then PPR ပိုက် isagood choice. Otherwise for cold water, HDPE pipe can do it very well.
Sunplast သည် ၁၅ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ယခုတရုတ်နိုင်ငံရှိရေပိုက်စနစ်အတွက် din8077 / 8078 စံ pn16, pn20, pn25 အစိမ်း / အဖြူ / မီးခိုးရောင် ppr ပိုက်၏ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူအဖြစ်လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်စက်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ထံမှတရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အခမဲ့ပါ။
hot Tags:: DIN8077 PPR ပိုက်, တရုတ်, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, စက်ရုံ, စျေးနှုန်း, ဝယ်, တရုတ်အတွက်လုပ်
PPR ပိုက်ပိုက်PPR ရေပိုက်အစိမ်းရောင် PPR ပိုက်PPR ပိုက် PN20PPR ပိုက် PN25PPR ပိုက်20mm PPR ပိုက်25mm PPR ပိုက်32mm PPRPPR ပိုက်
မီးခိုးရောင် PPR ပိုက်
White PPR ပိုက်
အစိမ်းရောင် PPR ပိုက်
PN25 PPR ပိုက်
PN20 PPR ပိုက်
PN16 PPR ပိုက်